Waiting for Godot in Zimbabwe	Jan 27, 2012	Written by Golden Maunganidze, Guest Contributor	font size
Just like the two characters in the play who wait for someone they cannot recognize, President Mugabe of the former liberation party and Zimbabwean Prime Minister and leader of the Movement for Democratic Change (MDC-T) Morgan Tsvangirai have unconsciously taken similar roles of Vladimir and Estragon when it comes to determine the time when Zimbabwe will hold the next elections.	On March 4, 2010, President Mugabe organized a press reception at Zimbabwe House in Harare where he discussed topical issues with top editors from all over the country. It was during that meeting when President Mugabe promised the nation that Zimbabwe was inevitably going to have elections by 2010. From that day, prospective legislators including some amateur politicians who believe in violence against innocent voters started to campaign.
The living standards for an ordinary Zimbabwean is not improving and yet politicians are only battling for their survival. The calls for elections keeps people in perpetual fear of violence normally associated with general elections in the country – at the same time, if elections are not coming soon, then Zimbabwe might be waiting for Godot in this regard.	Tagged under
Zimbabwe Mugabe elections politics Tweet
Last modified on Friday, 27 January 2012 09:48	Related items
« Op-Ed: Uganda's Nodding Syndrome vs. Power Syndrome	A Renewed Urgency for Regional Integration by the African Union »